Mareykanka oo digniin horleh u jeediyay Dowladda Suuriya - GTN SOMALI TV
Mareykanka ayaa dowladda Suuriya uga digay duulaan ay ku qaado koonfurta dalkaasi.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxaa ay sheegtay in Mareykanka uu qaadi doonaan waxa ay ugu yereen tallaabooyin munaasab ah oo ku haboon, haddii dowladda Suuriya ay kusoo xad gudubto goobaha loo callaamadeeyay in uusan dagaal ka dhicin.
Deegaankaasi oo ku dhaw xadka Suuriya ay la wadaagto dalalka Urdun iyo Israel ayaa ahaa mid aan ku jirin gacanta dowladda, kadib toddobo sano oo dagaal ah.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu shegay in dowladda Ruushka oo xubin ka ah golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay tahay inay adeegsato saameynta ay ku leedahay dowladda madaxweyne Bashar Al-Asad, oo ay kaga hortagto duullaanka ay damacsantahay.
Khamiistii aynu soo dhaafnay, dowladda Mareykanka aya oggolaatay in lix milyan oo doolar ay siiso kooxda gurmadka degdega ee White Helmets, kuwaasi howla samata bixin ah ka sameeya gudaha dalka Suuriya.
Xagla Toosiye Oo La Weydiiyay In Uu Garoowe Ku Sii Jeedo + Jawaabta Uu Ka Bixiyay